Mozika rock : 35 taona niakarana an-tsehatra ry Iraimbilanja | NewsMada
Mozika rock : 35 taona niakarana an-tsehatra ry Iraimbilanja
Mandeha tokoa ny taona… Ela ny nankafizan’ny Malagasy ny tarika Iraimbilanja ary efa ela ihany koa ny mpankafy mozika mavesatra no niondana azy ireto. Efa betsaka ny lalana nolalovana ho an’ny tarika Iraimbilanja, ary azo lazaina fa efa voapetraka ho mandrakizay ao anatin’ny tantaran’ny mozika malagasy ny anaran’izy ireo.
Ankehitriny, mankalaza ny faha-35 taony ny tarika. « Tanin-dolo », anisan’ny hira nampalaza ny tarika Iraimbilanja tamin’izany fotoana izany. Nanamarika ny taona 90 izy io, ary mbola anisan’ny hira tsy vitsy mpahalala, mandraka ankehitriny. Manodidina ny fiarovana ny tontolo iainana, amin’ny ankapobeny, ny votoatin’io hira io, raha tsiahavina. Tsy atao mahagaga raha tsy mifanalavitra amin’izay ihany koa ny tanjona amin’ity fankalazana ny faha-35 taon’ny tarika ity.
Ezaka ataon’ny tarika tokoa hatramin’izay izany fiarovana ny tontolo iainana izany. « Ny fiverenana amin’ny fomba taloha, izany hoe, ny fambolena, no anisany fitaovana lehibe entina miaro ny zavamaitso manodidina antsika », hoy ny lehiben’izy ireo. Maro ihany koa ny hetsika hanamarihana ny fankalazana ity tsingerintaona ity, toy ny fampisehoana goavana, saingy mbola tsy fantatra mazava ny fotoana sy ny toerana hanatanterahana izany. Ny inoana dia ny hoe, tsy handiso fanantenana antsika ny tarika Iraimbilanja : nanome ny soa sy ny tsara hatrany izy, ary mbola hitohy izany rehetra izany.